RWTH Aachen University - Tadisha Kwamanye Amazwe e-Germany
RWTH Aachen University Yokuxhumana
abafundi (ngu.) :
Ungakhohlwa xoxa RWTH Aachen University
Bhalisa at RWTH Aachen University
I Excellence Initiative of the German ohulumeni federal kanye nesimo walungiselela umfutho omkhulu eminye
ukuthuthukiswa RWTH Aachen University. Isu yesikhungo on ngalo yimpumelelo Excellence Initiative isicelo sasisekelwe likwazi, okwamanje, liye landiswa ukwakha isu lesikhathi eside ukuze aqinise kuzo zonke izindawo University futhi kuthuthukise amaphrofayli zabo. In inqubo iye kwashesha enkulu, okuyinto kuyabonakala, phakathi kwezinye izinto, emisebenzini ebanzi isakhiwo.
ubufakazi obubonakalayo bokuba lena RWTH Aachen Campus ukuthi isakhiwa ngokubambisana nemboni kanye okuyinto ukwakha omunye esewonke ngobukhulu ucwaningo eYurophu. Abafundi kanye nabasebenzi RWTH Aachen uyozuza ngokulinganayo kusuka ngalezi zenzakalo futhi ngokucacile bayamenywa ukuba ahileleke ekubumbeni imizamo ngabanye.
Imibono eziningi ezithakazelisayo kakade nomthelela esifundeni lonke lwedolobha Aachen ne yonke indawo tri-emngceleni waseJalimane, Belgium kanye Netherlands. An umphakathi ulwazi innovative ivela ukuthi uhlobene eduze networked nabathile sokuhola ucwaningo kanye nabalingane wezwe.
RWTH Aachen kuyinto enkulu ukushayela force ngemuva le ntuthuko. Futhi Aachen, njengoba okuhlalekayo kulo nathandekayo lapho kwakuphambana khona amasiko ezintathu, kuyisixazululo imvelo ekahle le nqubo creative yentuthuko.
With yayo 260 umisa ikhono ayisishiyagalolunye, RWTH Aachen liphakathi okuholela izikhungo zesayensi kanye nocwaningo European. 43,721 abafundi 152 izifundo zokutadisha zibhaliswe for semester ebusika of 2015/16, kufaka 7,904 abafundi international 125 amazwe. Ukufundisa at RWTH Aachen kuyinto isicelo-ngamakhasimende wokuqala nomkhulu kunabo bonke. Ngakho Abafundi basuke likufuna abaphathi njengoba junior futhi wosomabhizinisi nezimboni.
rankings National (of) nokuhlolisisa international iyakufakazela ukuthi ikhono RWTH iziqu wawubona ukusingatha imisebenzi eyinkimbinkimbi, ukuxazulula izinkinga ngendlela eyakhayo emsebenzini team futhi uthathe ubuholi izindima. Ngakho akumangalisi ukuthi amalungu amaningi ibhodi amaqembu ezinkampani German wafunda RWTH Aachen.
RWTH Aachen ayibekele ngokwalo ube nemigomo ecacile neqondile. Ngonyaka we 2020, ihlose kube University best German of technology futhi omunye phezulu emihlanu eYurophu njengoba kulinganiswe okukhipha academic, izinga abaphothule yayo, nangokusebenzisa ngezimali zangaphandle. It ulwela ukuba umdlali ehamba phambili e imiklamo yocwaningo imikhakha eyahlukene emikhulu. It ihlose yinto enyuvesi wonke amazwe omhlaba kanye ubuhle olungapheli ucwaningo nokufundisa siqeqesha izifundiswa ezivelele kanye nabaholi ukufanelekela kahle abasha for embonini kanye nomphakathi kokubili umongo zikazwelonke nezamazwe ngamazwe.
Kule nqubo ezinkulu futhi eziyinkimbinkimbi of reorientation, RWTH Aachen ubona ngokwaso njengoba eyunivesithi lapho wonke amaqembu ngentshiseko nesandla omuhle ohlala njalo. futhi ovulekile Ukukhulumisana namasiko. Wonke amalungu enyuvesi, kubandakanya abafundi, bambiso ukusekela ilunga eliphezulu ukusebenza isiko: mncintiswano ithathwa njengendlela isici eyakhayo yokuphila academic. RWTH Aachen ibona lokhu kungcono isiko creative of change isimiso esiyisisekelo emisha kanye nenqubekela phambili nomphakathi.
Georesources namathuluzi Ubunginiyela
School of Business kanye nezomnotho
On 25 Januwari 1858, isikhulu Frederick William yasePrussia (umbusi kamuva German), yethulwa nge umnikelo 5,000 talers inkongozelo, ezaphakanyiswa Aachener und Münchener Fire Insurance Company, eyandulela lenkampani AachenMünchenerinsurance. ngoMashi, isikhulu wakhetha ukusebenzisa ukunikelela wathola sikhungo lokuqala Prussian ubuchwepheshe endaweni ethile esifundazweni theRhine. Esihlalweni lo mkhuba waqhubeka emthumeni engaphezu kwengu-; ngenkathi isikhulu ekuqaleni sakubona kukuhle Koblenz, imizi ofAachen, Bonn, Cologne futhi Dusseldorf uyasetshenziswa, nge Aachen ne-Cologne kokuba izimbangi main. ekugcineni Aachen won umqondo ngezimali elisekelwa inkampani yomshuwalense kanye amabhange basekhaya. Obungahluleki entsha Polytechnikum senzeka 15 May 1865 kanye izinkulumo waqala phakathi neMpi Franco-Prussian ku 10 October 1870 nge 223 abafundi futhi 32 othisha. Lesakhiwo esisha esasinalo njengoba injongo yayo eyinhloko imfundo onjiniyela, ikakhulukazi embonini yezimayini endaweni Ruhr; kwakukhona izikole yokuthakwa kwamakhemikhali, Ihluzo Elingafaki Ukuqoka futhi mechanical kanye i ezethula esikoleni jikelele ayebafundisa mathematicsand yemvelo sciences kanye ezinye social sciences.
Isikhundla okungacaci we Prussian entsha polytechnika (okuyinto ngokusemthethweni kwakungafanele amanyuvesi) abathintekayo eminyakeni yokuqala. Polytechnics siswele udumo emphakathini kanye nenani labafundi kwehle. Lokhu waqala ukushintsha 1880 lapho ekuqaleni RWTH, phakathi kokunye, kwaba ihlelwe kabusha njengoba Royal Technical University, yazuza isihlalo Prussian House of Lords and ekugcineni iwine ilungelo pha PhD (1898) degree Diplom izihloko (yethulwa kuleli 1902). Ngawo lowo nyaka, phezu 800 abafundi besilisa wabhalisa. Ngo 1909 Owesifazane wokuqala zingeniswe futhi umculi u-August von Brandis kuphumelele Alexander Frenz e-Faculty of Architecture njengendlela “Uprofesa we sibalo kanye landscape imidwebo”, Brandis baba dean e 1929.
IMpi Yezwe I, Nokho, wazibonakalisa kwenkinga sina enyuvesi. Abafundi abaningi ngokuzithandela ahlangana ndawonye futhi abafa empini, futhi izingxenye inyuvesi abangu ngokushesha matasa noma ashaqa amakhasethi.
ngenkathi (ke kusaba bobukhosi) TH Aachen (Aachen University) bachuma 1920 lapho umuntu eba amandla akancikile kwabanye ngezinye izinto, ka nezikhungo entsha eziningana futhi abafundi jikelele’ ekomidini, izimpawu zokuqala radicalization ubuzwe futhi zabonakala ngaphakathi enyuvesi. -Third Reich sika Gleichschaltung we TH e 1933 wahlangana ukumelana iphansana esusela abafundi ubuhlakani. Kusukela ngo-September 1933, bamaJuda kanye (nezinsolo) osolwazi Communist (nokusuka 1937 abafundi futhi) abangu ehlelekile beshushiswa futhi ayifakiwe inyuvesi. Nezitulo ongakhiwe abangu ngokuya inikezwe NSDAP party-amalungu noma nabo. Inkululeko ucwaningo kanye nokufundisa phathelana ikhinyabezwa, nezikhungo kubalulekile izinhlelo umbuso BakaJehova babebizwa ehlelekile esungulwe, nezihlalo ekhona ukunyusele. Kafushane uvaliwe 1939, the TH baqhubeka courses 1940, nakuba ngenombolo eliphansi abafundi. On 21 October 1944, lapho Aachen capitulated, Ngaphezu kwe 70% kuzo zonke izakhiwo ze-enyuvesi kwabhidlika noma kakhulu ezilimele.
Ngemva kokuphela kweMpi Yezwe II ngo- 1945 eyunivesithi walulama futhi lanwetshwa ngokushesha. Ngo-1950, osolwazi abaningi ababekade isusiwe ngoba leyo mikhaya ikuyiphi nezinsolo nge yamaNazi avunyelwa ukuba abuyele futhi uquqaba nezikhungo emisha eyasungulwa. Ngu-1960 ngasekupheleni, the TH kwadingeka 10,000 abafundi, okwenza kube esikhulu phakathi wonke amanyuvesi German lobuchwepheshe. Nge isisekelo amandla zefilosofi futhi medical e 1965 futhi 1966, ngokulandelana, eyunivesithi waba ngaphezulu “universal”. Ikhono esanda eyasungulwa ngo ethile yaqala edonsa abafundi entsha, futhi inani labafundi sikhiqize inani eliphindwe kabili kabili kusukela 1970 (10,000) ukuze 1980 (Ngaphezu kwe 25,000) nokusuka 1980 ukuze 1990 (Ngaphezu kwe 37,000). Manje, inombolo isilinganiso kubafundi emhlabeni 42,000, nge cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yazo zonke abafundi ukuba abesifazane. Ngu imigomo isihlobo, cwaningo-izinhlelo ezithandwa kakhulu ubunjiniyela (57%), isayensi yemvelo (23%), ezomnotho kanye humanities (13%) nemithi (7%).
Ngo-December 2006, RWTH Aachen kanye Sultanate of Oman yasayina isivumelwano ukusungula German University yangasese of Technology Muscat. UProfesa kusukela Aachen uyasizakala ekubhekaneni ekuthuthukiseni uhlelo lwezifundo ukuze okwamanje ezinhlanu cwaningo-izinhlelo nabasebenzi zesayensi phezu ezinye izifundo zokuqala.
Ngo 2007, RWTH Aachen wakhethwa njengomunye woFakazi ayisishiyagalolunye Amanyuvesi German of Excellence ngoba umqondo walo esikhathini esizayo RWTH 2020: Umhlangano Izinselelo Global, abahola ke kusikisele i eyunivesithi elite. Nokho, nakuba uhlu amanyuvesi ehloniphekile imiqondo yabo esizayo ikakhulukazi siqukethe izikhungo ezinkulu futhi kakade ihlonishwe, Federal Ministry of Education and Research umangalele ukuthi isinyathelo okuhloswe ngayo ukugqugquzela emayunivesithi umqondo ozinikele esizayo ngakho akwazi ukuqhubeka ucwaninga nge-i level.Having international won izimali zonke obuthathu uxhaso, inqubo alethwe RWTH Aachen University i izimali ezengeziwe ingqikithi € 180 million 2007-2011. Enye nemigqa emibili yama-uxhaso izikole iziqu, lapho Aachen Institute Sokutadisha Okuthuthukile yezamakhompyutha Engineering Science ithola uxhaso nalokho okubizwa ngokuthi “Amahlukuzo ubuhle”, lapho RWTH Aachen wakwazi ukunqoba sokukhokhaela amaqoqo amathathu: Ultra High-Speed ​​Ucingo Information and Communication (Umicore), Integrative Production Technology for Amazwe High-amaholo futhi Izibaseli Ezenzelwe kusukela Biomass
Uyafuna xoxa RWTH Aachen University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
RWTH Aachen University kumephu
Izithombe: RWTH Aachen University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo RWTH Aachen University
Joyina ukuxoxa ka RWTH Aachen University.